पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको अन्तर्वार्ता : केपी ओली रहँदासम्म अध्यक्षमा अरु विकल्प छैन, म महासचिवमा उठ्छु
व्यापारीसँग फोहोर शुल्क उठाउँदै तुलसीपुर उपमहानगर
कांग्रेस महाधिवेशन : सप्तरी-१ मा १४ पदकाे मत परिणाम सार्वजनिक
Home अन्तर्वार्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको अन्तर्वार्ता : केपी ओली रहँदासम्म अध्यक्षमा अरु विकल्प छैन, म...
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशबाटै पहिलो पदाधिकारी हुने भाग्यमानी एमाले नेता हुन् । पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङ एमालेका गण्डकी प्रदेशका पूर्व इन्चार्ज पनि हुन् । हाल एमाले सचिव उनी दशौं महाधिवेशनमा माथिल्लो पदको खोजीमा छन् । सोही कारण गुरुङले आसन्न महाधिवेशनमा महासचिवमा दाबी गर्ने घोषण गरेका छन् । तर सहमतिमा नेतृत्व चयन भए उपाध्यक्ष वा उपमहासचिवमा चित्त बुझाउन सकिने संकेत पनि गरेका छन् । उनै गुरुङसँग न्युज कारखानाले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
एकताको महाधिवेशन भनेकै यही हो । एकताको अर्थ त्यतिबेला पूरा हुन्छ, जतिबेला हामीले तीनवटै धार एड्जष्ट हुन्छन् । पद विभाजन, माइक्रोम्यानेजमेन्टमा सबैको प्रत्याभूति हुन्छ ।
एमालेबाट अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, माओवादीको नेतृत्व कसले गर्ने र एमालेमा रहेका माधव पक्ष भनिएकाहरूको नेतृत्व कसले गर्छ ?
Previous articleअदालतबाट दंगा प्रहरी हटाउन र मानवअधिकार आयोगलाई अनुगमन गर्न बारको आग्रह
Next articleकांग्रेसको प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन : तनहुँ २ (ख) मा निर्विरोध
चितवन माओवादीको प्रभाव क्षेत्र हो भन्नु भ्रम मात्र हो : प्रदीप ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता )
आईपीएल : राजस्थानको पहिलो जित,बैंग्लोर लगातार पराजित
स्मृतिको रक्तिम पानामा कमरेड गमबहादुर मोक्तान ‘पहाड’ !!!
यो कला क्षेत्रको लागि, मानवताको लागि बृहत हिर्दय बनाएर क्षेमा दिनु...